Midowga Yurub oo in ka badan 100 milyan ku bixinaaya gargaar bani’aadamnimo oo Soomaaliya la siiyo. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Kuwait oo Somaliya ugu deeqday lacag badan
Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqday hawlgal Shabaab lagu soo afjaraayo
Madaxweyne Farmaajo oo maanta Brussels ka furaya shirka looga hadlaayo arrimaha Somaliya
Midowga Yurub oo in ka badan 100 milyan ku bixinaaya gargaar bani’aadamnimo oo Soomaaliya la siiyo.
July 11, 2018 | Filed under: WARARKA SOOMAALIYA | Posted by: Maxamuud Axmed
Midawga Yurub ayaa 89 milyan oo doolar (ku dhowaad $ 105 milyan) ku taageeray gargaarka bani’aadamnimo ee Soomaaliya, sida laga soo xigtay Guddiga Yurub Arbacadii.
Guddiga ayaa sheegay in maaliyaddu ay ka horeyso Forum of Partnership Forum oo ay marti-galisay Midowga Yurub oo ka dhacaya toddobaadka soo socda July 16-17.
“Dhibaatooyinka ba’an ee laba sano oo abaar ah iyo daadadkii ugu dambeeyay ee daadadku ay ku qaadeen malaayiin dad ah oo malaayiin qof ah oo ku nool Soomaaliya,” ayuu yiri Guddoomiyaha Christos Stylianides, oo mas’uul ka ah gargaarka bani’aadamnimada iyo maareynta dhibaatooyinka, ayaa lagu sheegay bayaanka.
“Gargaarkeenu wuxuu bartilmaameedsan doonaa kuwa ugu nugul wuxuuna siinayaa taageero nafo lagu badbaadinayo kuwa ay saameeysay naxdinta cimilada iyo iskahorimaadka gudaha,” ayuu yiri Stylianides.
Guddiga ayaa xusay in Midowga Yurub uu si ballaaran u kordhay gargaarka bini’aadanimo ee Soomaaliya – oo loo qoondeeyay € 119 milyan ($ 135 milyan oo doolar) waddanka sanadkii hore.
“Gargaarka gargaarka degdegga ah, 89 milyan oo qof oo gargaar deg deg ah ayaa loo dirayaa Soomaaliya si loo gaaro bulshooyinka barakacay abaarta daran,” ayay tiri, “… wuxuu diiradda saarayaa ka-hortagga iyo daaweynta nafaqo-xumada, biyaha iyo ilaalinta xoolaha iyo sidoo kale tallaabooyin caafimaad oo looga hortago cudurrada faafa. ”
Iyadoo ay tilmaamayso kala bar dadka baahida loo qabo in ay helaan gargaar cunto iyo gargaar bani’aadanimo, Guddigu wuxuu sheegay in 1.2 milyan oo carruur ah la filayo inay nafaqo-xumo ba’an ku dhacdo inta lagu jiro muddada 2018.
“Waddanku wuxuu leeyahay 2.6 milyan oo qof oo gudaha ku barokacay, xaaladduna way ka sii daraysaa kadib daadadkii April 2018, taas oo ay saameeysay 427,000 qof waxayna ku barakaceen 175,000 barakacayaal,” ayay tiri.
“Marka laga soo tago dhibaatooyinka cimilada, iskahorimaadka ayaa weli ku jira dhibaatada bani’aadamnimada ee Soomaaliya iyada oo ay jirto nabadgelyo-xumo iyo rabshad khatar ah oo soo gaartay dadka rayidka ah muddo tobanaan sano ah, taas oo saamaynaysa hab-nololeedyada iyo khalkhalka horumarka iyo horumarka.”
Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in lacag dheeraad ah oo ah 500,000 oo doolar (qiyaastii $ 585,000) ay u socoto Jabuuti si ay u taageerto qaxootiga ku sugan waddanka iyada oo la siinayo biyo, fayadhowr iyo badbaadin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga.
“Jabuuti, Midowga Yurub wuxuu siiyaa gargaarka bani’aadamnimo ee dadka qaxootiga ah iyo sidoo kale beelaha martida loo yahay,” ayay tiri. “Taniyo 2012, in ka badan 10 milyan oo doollar oo gargaar degdeg ah ayaa loo qoondeeyey dalka.
“Maalgalinta bani’aadamnimada ee Midowga Yurub wuxuu siinayaa qaxooti [Jabuuti] iyada oo heleysa biyo nadiif ah iyo fayadhowr iyo sidoo kale ilaalin,” ayay Guddiga ku dartay.
Xigasho: Anadolu Agency